ရှေးဟောင်းမြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာဘာသာစကားစတင်ပေါ်ပေါက်ရာ ပုဂံခေတ်၌ပြောဆိုခဲ့ကြသော ဘာသာစကားဖြစ်၍ မြန်မာဘာသာ၏ အစောဆုံးသောပုံစံလည်းဖြစ်သည်။ ထိုဘာသာစကား၏ကာလမှာ ၁၂ ရာစုမှ ၁၆ ရာစုအထိဖြစ်ပြီး ၁၆ ရာစုတွင် ခေတ်လယ်မြန်မာဘာသာစကားသို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ရှေးဟောင်းမြန်မာဘာသာစကားကို ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သဒ္ဒါနှင့်ဝေါဟာရတို့မှာ ခေတ်သစ်မြန်မာစာနှင့် ကွာခြားမှုရှိသော်လည်း အခြားစကားလုံးအသုံးအနှုန်းများမှာ ဆင်တူကြပါသည်။
ဗျည်းတွဲသင်္ကေတများတွင် လဆွဲဗျည်းတွဲဟူ၍ရှိခဲ့ရာ ကဝဂ်နှင့်ပဝဂ်ဗျည်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည် (သာဓက- က္လ၊ ဖ္လစ်)။ နောက်ပိုင်းတွင် ကဝဂ်ကိုယပင့်အသံဖြင့်လည်းကောင်း ပဝဂ်ကိုရရစ်သံဖြင့်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲရေးသားခဲ့ပါသည် (သာဓက- က္လ > ကျ၊ ဖ္လစ် > ဖြစ်)။
ဝစ္စပေါက်နေရာတွင် ဟသတ် (ဟ်) ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါသည် (သာဓက- သာဟ် = သား)။ အောက်မြစ်နေရာတွင် အသတ် (အ်) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း "အ"ကိုအောက်၌ ဆင့်၍သော်လည်းကောင်း ရေးသားခဲ့ပါသည် (သာဓက- ပေအ် = ပေ့၊ နှင္အ် = နှင့်)။ "ဧ"သရကို လုံးကြီးတင်ယပက်လက်သတ်ဖြင့်ရေးသည် (ပိယ် = ပေ၊ ပေး)။ သဝေထိုးဝဆွဲကို တစ်ချောင်းငင်ယပက်လက်သတ်ဖြင့်ရေးသည် (ငုယ် = ငွေ)။
"အို"ကိုမူ သရအဖြစ်မသတ်မှတ်ထားခဲ့သောကြောင့် ဝသတ် ဖြင့်ရေးသားခဲ့ပါသည် (ထိုဝ် = ထို)။ ထို့အပြင် "အော်"သရမရှိခဲ့သောကြောင့် ဝသတ်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သည် (ရခ္လေသဝ် = ရချေသော်)။ ၁၂ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် "အော်"သရကို ရှေ့ထိုးအဖြစ်ရေးခဲ့ပါသည် (စိယ်တိတ် = စေတီတော်)။
ရှေးခေတ်မြန်မာစကားတွင် ပုဂ္ဂလနာမ်စားများရေးသားပုံမှာ "ငါ" ကို "ငာ"၊ "ငါတို့" ကို "အတိုဝ္အ်"၊ "သူ" ကို "အယင်" ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာစကားစတင်ပေါ်ပေါက်သည့်အချိန်မှာပင် "၏"၊ "၍"၊ "၌" တို့ကို အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ "၏"ကို ထိုခေတ်အခါက "ဧအ်" ဟူ၍ရေးသားခဲ့ရာ စာကြောင်း၏အဆုံးစကားလုံးအဖြစ် သုံးနှုန်းခဲ့ပါသည်။ "၍"ကို "ရုယ္အ်"ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ရာ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဆက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ "၌"ကို "နှိုက်"ဟု ရေးသားပြီး နေရာပြဝိဘတ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင်ပါဠိဘာသာ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြိယာအနက်ကိုငြင်းပယ်ရာတွင် "အ"ပစ္စည်းဖြင့် အသုံးပြုထားပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာတွင် "မဖူးရစေနှင့်" ကို "အဖူးရစေ" ဟူ၍ရေးသားထားပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ "မ" ကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။
သရဝဏ် - သရဝဏ်၊ ဩဝဏ်၊ သရဝန်၊ ဩဝန်၊ သြွာန်
ကျစွာမင်းမိထွေးတော်ကျောက်စာများမှ စာသားအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုစာသားကို ယခုခေတ်ရေးအသားဖြင့် ပြောင်းရေးကြည့်ပါက အောက်ပါအတိုင်းရပါသည်။
မြန်မာကျောက်စာများကို ဆရာကြီးဦးငြိမ်းမောင်သည် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုခဲ့၍ "ရှေးဟောင်းမြန်မာ ကျောက်စာများ" စာအုပ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံခြားသားလေ့လာသူများသည်လည်း ထိုကျောက်စာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့အက္ခရာဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ရေးသားထုတ်‌ဝေခဲ့ကြပါသည်။
Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Old Burmese"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
Herbert၊ Patricia; Anthony Crothers Milner (1989)။ South-East Asia: Languages and Literatures:aSelect Guide။ University of Hawaii Press။ p. 5။ ISBN 9780824812676။
Wheatley၊ Julian (2013)။ "12. Burmese"။ in Randy J. LaPolla; Graham Thurgood (eds.)။ Sino-Tibetan Languages။ Routledge။ ISBN 9781135797171။
Bradley, David (Spring 1993). "Pronouns in Burmese-Lolo". Linguistics of the Tibeto-Burman Area 16 (1). Melbourne: La Trobe University.
Uta Gärtner, Jens Lorenz, ed. (1994)။ "3"။ Tradition and Modernity in Myanmar: Proceedings of an International Conference Held in Berlin from May 7th to May 9th, 1993။ Tradition and Modernity in Myanmar။ LIT Verlag Münster။ pp. 366–426။ ISBN 9783825821869။
ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာန (၁၉၉၈)။ "နောက်ဆက်တွဲ"။ ငြိမ်းမောင်၊ ဦး (တည်းဖြတ်)။ ရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ။ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန။
ဦးငြိမ်းမောင် (၂၀၁၈)။ ရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ (Ancient Burmese Inscriptions)။ Zenodo http://doi.org/10.5281/zenodo.1202320
U Nyein Maung, Lewis-Wong, Jennifer, Khin Khin Zaw, McCormick, Patrick, & Hill, Nathan. (2020). A Structured Corpus of Old Burmese Stone Inscriptions (Version 1) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4321314